FAHAZARAN-DRATSY : Nitazona an-keriny mpanao gazety ny ekipan’ny antoko HVM
Mbola mihevitra ny tenany ho eo amin’ny fitondrana sy tompon’ny fanapahana hatrany ny antoko Hvm. Mitohy hatrany ny fanampara-pahefana ataon’ireo ekipan’ny kravaty manga, ka hatramin’ireo mpanao gazety manao ny asany avy no nosamborina ary noterena fotsiny tsotr’izao hamafa ireo sary azony . 13 novembre 2018
Manao tsipaky ny miala aina. Manohy ny fanampara-pahefana efa nahazatra azy hatramin’ izay ny ekipan’ny antoko Hery vaovao ho an’i Madagasikara na ny HVM. Mbola mametraka ny tenany ho tsy refesi-mandidy, ka tsy mahalala intsony ny fetran’ny fahefahana farany tokony hananany. Omaly maraina dia mpanao gazety manao asany avy ao amin’ny fahitalavitra KoloTv no niharan’ny antsojay nataon’ny Hvm indray.
Teny amin’ny toeram-pandrindrana ny fampielezan-kevitry ny kandidàn’ity antoko ity na « QG »-ny tetsy Andraharo no nis